Isizathu Sokuba Ufanele Ukwazi NgePhethon eRoma
UbuGcisa bobuGcisa Iimviwo zeembali
I-Influencial Architecture ye-Pantheon eRoma
I-Classical Building Ephefumlelweyo Neoclassicism
I-Pantheon eRoma ibe yindawo ekuya kuyo abavakhenkethi kunye nabenzi befilimu, kodwa nakwabakhi, abaqulunqi, kunye nabaculi abavela kwihlabathi lonke. I-geometry yayo ilinganiswe kwaye iindlela zayo zokwakha ziye zafundiswa, njengoko kuchaziwe kule ntengiso.
I-Piazza della Rotonda kunye nomthombo we-18 we-Century, i-Fontana del Pantheon, kufuphi ne- Pantheon. J.Castro / Getty Izithombe
Akusiyo i-Pantheon's facade ejongene ne-Italian piazza eyenza lo mboniso onobugcisa. Kuqala ukuvavanywa nokwakhiwa kweedome okwenze iRoma Pantheon ibalulekileyo kwimbali yokwakha. Ukudibanisa i-portico kunye nedome kuye kwathonya i-Western design architectural for centuries.
Usenokuba uyayazi le sakhiwo. Ukususela kwiholide yamaRoma ngo-1953 kwiiNgelosi kunye needemon ngo-2009, iifilimu ziye zabonisa i-Pantheon njengesiqulatho se-movie esilungiselelwe.
Pantheon okanye iCarthenon?
I-Pantheon eRoma, i-Italy akufanele idideke neCarthenon e-Athene, eGrisi. Nangona bobabini babephakathi kweetempile kwizithixo, itempile yaseGreek Parthenon, e-Acropolis, yakhiwe amakhulu eminyaka phambi kwetempile yaseRoma yasePalheon.
Ukunikezelwa kwePantheon eRoma. De Agostini Library Library / Getty Izithombe (ehlanjwe)
I-Pantheon portico okanye i-entryway yindlela edibeneyo, yokwakhiwa kweklastiki kunye nemigca emithathu yamakholomu aseKorinte - ezisibhozo ngaphambili kwaye ezimbini imigca yesine-iphakanyiswe yintambo engxantathu. Iigranite kunye neemabula zamarabula zithengiswa eYiputa, ilizwe eliyinxalenye yoBukumkani baseRoma.
Kodwa yi-dome ye-Pantheon - igcwaliswe ngengxowa evulekile phezulu, ebizwa ngokuthi i- oculus - eyenze le sakhiwo kubaluleke kakhulu namhlanje. I-geometry yedome kunye ne-oculus yelanga ejikelezayo kwiindonga zangaphakathi ziphefumlelwe abalobi, abenzi befilimu kunye nabaqulunqi. Yayiyindawo ephezulu yokuhlala kuyo yonke into eyathintela u- Thomas Jefferson osemncinci, owazisa ingcamango yokwakha kwilizwe elitsha laseMelika.
Imbali yePantheon eRoma
Umda wePantheon, eRome, eItali. I-Cultura RM / Getty Izithombe (ihlanjwe)
I-Pantheon eRoma yayingakhiwa ngosuku. Ukutshatyalaliswa kabini kwaye kwakhiwa kabini, "iTempile Labo Bonke Onkulunkulu" elidumiweyo laseRoma laqala njengesakhiwo somxholongwane. Ngaphezulu kwekhulu leminyaka, iPalonon yasekuqaleni yavela kwisakhiwo esakhiweyo, eyaziwayo ukuba ikhuthaze abacebisi ukususela ngaphambi kweMinyaka Ephakathi .
Abadala be-Archaeologists kunye neembali-mlando baxubusha ukuba ngubani umbusi kunye nabakhi bobugcisa abakhe i-Pantheon esiyibonayo namhlanje. Ngowe-27 BC, uMarcus Agrippa, umbusi wokuqala woBukumkani baseRoma, wamisela isakhiwo sePatonon. I-Agrippa ye-Pantheon yatshiswa ngo-AD 80 Yonke into ehleliyo yi-front portico, kunye nale mibhalo:
UMnu AGRIPPA LF COS. I-TERTIUM FECIT
NgesiLatini, i- fecit ithetha ukuba "wenza," ngoko uMarcus Agripa unxulumana ngonaphakade kunye noyilo lwePalheon kunye nokwakhiwa. UTito Flavius ​​Domitianus, (okanye, u- Domitian kuphela ) waba nguKumkani waseRoma waza wakha kabusha umsebenzi ka-Agripa, kodwa, watshisa kwakhona malunga ne-AD 110.
Emva koko, ngo-AD 126, uMlawuli waseRoma u-Hadrian wabuya wakha kabusha i-Pantheon kwisithonjana sezakhiwo zobuRoma esiyazi namhlanje. Emva kokuba sele ephila kwiminyaka emininzi yeemfazwe, i-Pantheon iyisakhiwo esilondolozwe kakhulu eRoma.
Ukusuka kweTempile ukuya kwiCawa
Isicwangciso soMgangatho wePantheon njengeTempile yaseRoma yasendulo. I-Kean Collection / Getty Izithombe (ihlanjwe)
I-Roman Pantheon yayakhiwa njengetempile kubo bonke oothixo. I-Pan isisiGrike esithi "zonke" okanye "zonke" kunye ne- theos yiGrike "uthixo" (umz., I-teolojia). I-Pantheism imfundiso okanye unqulo olunqula bonke oothixo.
Emva komhla we-AD 313 Umyalelo waseMilan wasungula ukunyamezela kwenkolo kulo lonke ubukumkani baseRoma, isixeko saseRoma saba liziko lehlabathi lamaKristu. Ngekhulu le-7, i-Pantheon yayingumSt. Mary wabaMartyrs, ibandla lobuKristu.
Umqolo wemiqolo yeendonga zangasemva zePalheon portico kunye nojikelezo lwegumbi lezakhiwo. Ezi zihlazi zinokuthi zenze imifanekiso yezithixo zobuhedeni, abalawuli bamaRoma, okanye abangcwele abangamaKristu.
I-Pantheon yayingazange ibe yindawo yokwakha yobuKristu yokuqala, kodwa isakhiwo sasisezandleni zobuPapa olawulayo. Ipapa Urban VIII (1623-1644) insimbi enexabiso eliyigugu ukusuka kwisakhiwo, kwaye ngokuphindaphindiweyo yongezelela ezimbini iindonga zebell, ezingabonwa kwezinye iifoto kunye nezithombe ngaphambi kokuba zisuswe.
I-Eye Eye View
Umbono we-Aerial View of Pantheon eRoma, Elawulwa yiDome ne-Oculus. UPatrick Durand / iSygma nge-Getty Izithombe (ihlanjwe)
Ukusuka ngasentla, i-Pantheon ye-19-foot oculus, umgodi ophezulu kwidome, luvule ngokucacileyo kwizinto. Ivumela ilanga kwikamelo lethempelini ngaphantsi kwayo, kodwa livumela imvula ingaphakathi, yingakho umgangatho weemarbo ngaphantsi ujikeleza ngaphandle ukucima amanzi.
I-Pantheon Dome kunye ne-Archeving Arches. Mats Silvan / Getty Izithombe (ihlanjwe)
AmaRoma asendulo ayenemakhono ekwakhiweni kwekhonkrithi. Xa bakha i-Pantheon malunga ne-AD 125 abakhi abanezakhono zaseRoma basebenzise ubunjineli obuphambili kwimigangatho yamaGrike yamaGrike. Banika i-Pantheon yabo iindonga ezinkulu ezinama-25 ezinyawo ukuxhasa i-dome enkulu eyenziwe ngekhonkrithi eqinile. Njengoko ukuphakama kwedome kuphakama, ikhonkrithi ixutywe kunye nezinto ezibonakalayo zamatye ezikhanyayo - eziphezulu ziyinxalenye yepumice. Ngomyinge olinganisa iimitha ezingama-43.4, i-dome ye-Roman Pantheon ifana ne-dome enkulu yehlabathi eyenziwe ngekhonkrithi engaqinisekanga.
"Iindandatho zenyathelo" zingabonwa ngaphandle kweedome. Iinjineli zobuchwephesha ezifana noDavid Moore zicebise ukuba amaRoma asetyenzise iindlela zokuqhayisa ukwakha idome - njengoluhlu lwamancinci amancinane kunye namancinci amancinane. "Lo msebenzi uthathe ixesha elide," u-Moore ubhale. "Izixhobo zokumisa zilungiswe ngokufanelekileyo kwaye zanikwa amandla okuxhasa inkxaso elandelayo .... Ngalunye ucenge lwalwakhiwa njengodonga oluphantsi lwaseRoma .... Ingqungquthela yokuxinwa (oculus) ephakathi kwidome ... yenziwe Iindandatho ezi-3 ezijikelezayo zetayile, zibekwe ngokuthe tye, enye ingaphezulu kweminye .... Le ndoda isebenza kakuhle ngokuhambisa ngokufanelekileyo ukunyanzeliswa kwamandla kule ndawo. "
I-Amazing Dome kwi-Roman Pantheon
Ngaphakathi kweDomon Dome eRoma, e-Italy. Mats Silvan / Getty Izithombe
Iiplantshi zePalheon dome ineemitha ezi-5 ezilinganayo zeevenkile ezingama-28 (iipaneli ezikhanyisiweyo) kunye ne-oculus ejikelezayo (ukuvula) kwindawo. Ukukhanya kwelanga ekuphumeni kwe-oculus kukhanyisa i-Pantheon rotunda. I- coffered ceiling kunye ne-oculus yayingabonakali nje kuphela, kodwa yanciphisa umthwalo womthwalo wephahla.
Ukuqhawula iArches kwiLonga lokuQonga lePalheon iDome eRome. I-Vanni Archive / Getty Izithombe (ihlanjwe)
Nangona iqonga lenziwe ngekhonkrithi, iindonga zitena kunye nekhonkrithi. Ukuxhasa ubunzima beendonga eziphezulu kunye nedome, izakhiwo zezitena zazakhiwa kwaye zingabonakala kwiindonga zangaphandle. Babizwa ngokuba "ukukhupha iinqonga" okanye "ukukhupha iinqonga."
"I-arch ekhulula ngokuqhelekileyo isakhiwo esinobukrakra esibekwe eludongeni, ngaphezu kwe-arch okanye nayiphi na ukuvula, ukuyikhulula ubuninzi bexabiso elincinci; - Penguin Dictionary ye-Architecture
Ezi ngqameko zanikezela amandla kunye nenkxaso xa ama-niches aqoshwe kwiindonga zangaphakathi.
I-Architecture Ephefumlelwe yi-Pantheon yaseRoma
IDome eMasitore Institute of Technology. UJoseph Sohm / i-Getty Izithombe (ihlanjwe)
I-Roman Pantheon kunye nepartico yayo yeklasi kunye nophahla olusenyakatho lwaba ngumzekelo owashukumisa i-Western architecture iminyaka engama-2 000. U-Andrea Palladio (1508-1580) wayengomnye wabalingisi bokuqala ukulungelelanisa umda wasendulo esibizwa ngokuba yiClassical . Ikhulu le-16 lePalladio i-Villa Almerico-Capra kufuphi neVicenza, i-Italy ithathwa njengeNooclassical , kuba izixhobo zayo - idome, iikholomu, izithintelo-zithathwe kwizakhiwo zobuGrike kunye namaRoma.
Kutheni ufanele ukwazi ngePantheon eRoma? Esi sakhiwo esinye esivela kwi-2 leminyaka siyaqhubeka sichaphazela indawo esakhiweyo kunye nolwakhiwo esilisebenzisa namhlanje. Izakhiwo eziziwayo ezilandelwayo emva kwePalheon eRoma ziquka i-US Capitol, iJefferson Memorial kunye neGraphic National eWashington, DC
U-Thomas Jefferson wayengumgqugquzeli wezakhiwo zePalheon, ebandakanya yakhe eCharlottesville, ekhaya laseVirginia eMonticello, iRotunda kwiYunivesithi yaseVirginia, kunye neVirginia State Capitol eRichmond. Inkampani yaseMkKim, iMead, neyeMhlophe yayiyaziwa kakhulu kwizakhiwo zazo ze-neoclassical kulo lonke elase-US I-Library yabo yaseRongo e-Rotunda-ephefumlelweyo e-Columbia University-eyona ndawo eyakhiwa ngo-1895-yaphefumlela omnye umakhi wokwakha i-Great Dome e-MIT. 1916.
Ngomnye we-1937 iMathala yaseManchester Central eNgilani ngowomnye umzekelo omhle waloo mbonakaliso we-neo-classical owenziwa njengethala leencwadi. EParis, eFransi, ngenkulungwane yeshumi le-18 iPhenthon yayisontweni, kodwa namhlanje iyaziwa ngokuba yindawo yokuphumla yamaFrentshi amaninzi - iVoltaire, iRousseau, iBraille ne-Curies, ukubiza ngambalwa. Ukuqulunqwa kwedome kunye ne-portico kuqala kubonakala kwiPalheon kunokufumaneka kwihlabathi, kwaye konke kwaqala eRoma.
> I-Penguin Diction of Architecture, Uhlobo lwesithathu, nguJohn Fleming, uHugh Hlonipha, noNikola Pevsner, iPenguin, 1980, iphe. 17
> I-Pantheon nguDavid Moore, PE, 1995, http://www.romanconcrete.com/docs/chapt01/chapt01.htm [kufumaneka ngoJulayi 28, 2017]
> I-Pantheon yamaRoma: Ukunqoba kwekhonkco nguDavid Moore, PE, http://www.romanconcrete.com/index.htm [kufumaneka ngoJulayi 28, 2017]
Hlola intsingiselo yendlela yokwakha
Imbali ye-Western Architecture kwiifoto
Isitayela saseSpeyin Amakhaya kwihlabathi elitsha
Izakhiwo ezi-10 eziphezulu ze-Modern Era
Fumana i-Beauty of Beaux Arts
I-2004 Collapse kwisikhumulo sezindiza uCharles de Gaulle
I-American Victorian Architecture, izindlu ukusuka ngo-1840 ukuya ku-1900
Ama-Aqueducts, Ukuthengwa kwamanzi kunye nokuLondolozwa kwiRoma yaseRoma
Ngokuthandana Nothando LwaseMelika Ngezixhobo Zogqirha
Ngaba Unokuzikhusela Ngomdla Ngama-Breast Implants?
Izinyathelo zeTranscription ukusuka kwi-DNA ukuya kwi-RNA
Umhla woMlando we-Afrika-weMerika: 1865 ukuya ku-1869
Iingoma ezi-10 eziphezulu ze-Black Eyed Peas
Ngo-1965 uShelby GT350 Mustang
I-Cheerleading Cheers, iiCants kunye neeYells
Funda Ukuthandaza Kwezi 4 Ezilula
I-Battle of Fort Sumter: Ukuvula iMfazwe YaseMelika
Iinqwelo zeMichiza zitshiza njani?
I-Antarctica: Yintoni ephantsi kweqhwa?
Izipho Iingcebiso kubaculi: IBhajethi kunye neziPhumo zeZiko elincinci
Abu Hureyra (eSiriya)
Ubume bemiSebenzi ye-Second Opium War
Iiprogram ezili-10 ezitsha zoThutho lweeNkqubo zama-1930
Iphrofayili yoMbulali Oyingqungquthela uJoseph Paul Franklin
Indlela yokugcina uKristu kwiKrismesi
Ukubeka iinjongo kunye nabaFundi abaQalayo
Yintoni eyenzekayo kwiBhunga laBantu kwi-Vacuum?
Izikhokelo zokufumana 'Isimo sengqondo' ekuBhalweni koBugcisa
Iindlela ezi-3 eziKhulu Iinkonzo ezichazwe kuBakhoboka
Iintlobo ezahlukeneyo zokuphambana kwePitars
I-American Man Regalia Regalia: I-Art of Powwow